E-News Nepali || Fast and Accuracy » दैव पनि कति निष्ठुरी,जुम्लीहा बच्चा जन्माएर २१ बर्षकी आमा बितिन्, बच्चाहरुको यस्तो बिचल्ली
दैव पनि कति निष्ठुरी,जुम्लीहा बच्चा जन्माएर २१ बर्षकी आमा बितिन्, बच्चाहरुको यस्तो बिचल्ली
दैव पनि कति निष्ठुरी । किन गरिबलाई नै चोट माथि चोट दिन्छौ, भगवान् । किन,यि जुम्ल्याहा नानीहरु जन्मेको ११ दिनमै उनीहरुबाट आमाको ममता खोस्यौ ? किन ज्याला मजदुरी गरेर खाने यि सोझा बुवालाई चोट माथि चोट दियौं ? प्रश्न सोध्छु,तर उत्तर पाउंदिन् ।
जब मैले थाहा पाएं, जुम्ल्याहा नानीहरु पाएको केहि दिनमै २१ बर्षकी आमा बित्नु भयो रे । ती दुई नानीहरुलाई दुध खुवाउने पैसा पनि छैन रे,भन्ने कुरा । कुदेर ती नानीहरु भए ठाउंमा पुगि हाले । नानीहरुको लागि दुध र औषधी उपचारका लागि एक आर्थिक सहयोग लिएर ।
त्यहां पुग्दा, अवस्था सांच्चिकै दयनिय रहेछ । जुम्ल्याहा नानीहरुको बुवा रामेछापका बाबु तामांग आफुले प्रेम गरेर बिवाह गरेको श्रीमती गुमाउनुको पिडामा दुखी हुंदै बसिरहेका थिए । उनलाई चिन्ता थियो, छोरीहरुलाई दुध खुवाउने पैसा पनि छैन,अब कसरी बचाउने ।
लकडाउनका कारण यि जुम्ल्याहा नानीहरुले आफ्नो आमा गुमाए । जुम्ल्याहा छोरीहरु पाएको ११ दिनपछिको रातमा आमा सबिनाको मृ त्यु कसरी भयो ? कहाली लाग्दो कथा छ ।
प्रकाशित मिति १४ आश्विन २०७७, बुधबार १८:५४